Fitsapana maimaim-poana amin'ny Netflix (2020) - Ankafizo ny streaming mandritra ny 30 andro - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana andrana maimaim-poana amin'ny Netflix?
Netflix dia iray amin'ireo serivisy streaming malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ny ampahany tena mahavariana amin'izany dia ny fanoloran'izy ireo fitsarana maimaimpoana iray volana. Azonao atao ny manangona vola ary mahazo miditra eo noho eo nefa tsy mieritreritra.Raha tena marin-toetra dia misy antony marobe tokony hisoratra anarana mandritra ny iray volana maimaim-poana amin'ny Netflix raha mbola tsy nanao izany!
Ary koa, mora be ny manomboka. Tsy mila mandany ora maro ianao amin'ny fikarohana voucher na kaody coupon.Raha ny valiny dia manana sary mihetsika mihoatra ny 6000 + sy seho 500 azo jerena i Netflix amin'izao fotoana izao.
Nahazo atiny mahavariana ry zareo handefasana sy hijerena eo noho eo. Andao isika hiresaka momba ny fomba ahafahanao mahazo andrana maimaim-poana amin'ny Netflix ary koa hianaranao bebe kokoa momba ny serivisy Netflix sy ny fomba ahafahanao mitaky izany maimaim-poana amin'ny volana voalohany izany. Avelao izahay hanoro anao ny fomba.
Teboka tadidio - tsy misy kaody promo ilaina.
Fampahalalana fohy momba an'i Netflix:
Raha tsy dia manana hevitra firy momba an'i Netflix ianao dia avelao izahay hilaza aminao fa Netflix dia mpamatsy vola lehibe eran-tany amin'ny andian-tsarimihetsika an-tserasera sy sarimihetsika. Ity mpanome tolotra ity dia naorina tamin'ny 1997 tany Scotts Valley, Kalifornia.Miorina any Los Gatos, CA. ny foiben'izy ireo.
Hatramin'ny volana aprily 2020, Netflix dia nitatitra fa manana mpanjifa mihoatra ny 170 tapitrisa manerantany (60 tapitrisa ao Etazonia fotsiny).Nanomboka tamin'ny alàlan'ny fanomezana DVD tahiry fisaka amin'ny alàlan'ny serivisy mailaka izy ireo izay andoavanao sarany voafantina ary afaka misafidy mpanjifa 100 amin'ny lohateny DVD sy kapila Blu-ray ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny hofan-trano tsy voafetra ary tsy misy sarany tara, tena tsy diso ianao. Netflix dia fantatra ankehitriny amin'ny maha-mpitarika ny haino aman-jery an-tserasera streaming amin'ny resaka atiny, mpamandrika ary vola azo. Manana mpampiasa be dia be izy io ankehitriny.
Manana fihenan'ny mpianatra ve ny Netflix?
Sarimihetsika 50 tsara jerena amin'ny Netflix
Nanazava ny fitsapana an'i Netflix:
Fantatrao fa mazàna dia mila mandany $ 100 isam-bolana ianao noho ny tariby ary koa mijery sarimihetsika, izay tsapako fa be loatra.Ny mpamatsy servisy tariby dia tsy manome anao manahirana maimaimpoana na maimaim-poana amin'ny fanandramana ny serivisin'izy ireo koa satria mandany vola ny mandefa ilay teknisianina hivoaka hametaka ny boaty taribyo eo amin'ny toeranao.
Miaraka amin'ny famandrihana Netflix, azo atao amin'ny Internet ny zava-drehetra. Ny hany mila ataonao dia ny misoratra anarana fotsiny ary misoratra anarana amin'ny volana maimaim-poana izay manome anao fidirana eo noho eo amin'ny tranombokiny. Raha tsy te hanohy ianao dia esory alohan'ny hifaranan'ny volana voalohany!
Ahoana no fomba ahazoana fitsapana Netflix maimaim-poana?
Araka ny fantatrao, Netflix dia serivisy streaming an-tserasera izay manolotra atiny media maro karazana ho takalon'ny saram-bola kely isam-bolana avy amin'ireo mpampiasa azy. Amin'ny maha mpanjifa anao dia azonao atao tsara ny manararaotra ny fanangonana sarimihetsika goavambe Netflix, andiana fahitalavitra, famokarana tany am-boalohany, ary horonantsary fanadihadiana hijerena na aiza na aiza, na ny solosainao, smartphone, na takelaka misy anao. Na izany aza, raha misavoritaka ianao raha te hisoratra anarana amin'ity serivisy famandrihana isam-bolana ity, dia azonao atao ny manandrana azy io aloha mandritra ny fotoam-pitsarana iray volana.
Netflix dia manome fitsarana maimaimpoana mandritra ny iray volana. Misy fepetra sasany toa anao tokony hanana carte de crédit. Raha tsy manana crédit ianao dia azonao atao ny mampiasa ny Gift Card Netflix.
Ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny mifantina drafitra iray. Mba hanaovana izany dia mila mankany amin'ny tranokala Netflix ianao ( https://www.netflix.com/ ) ary kitiho ny bokotra Join Free for a Month any.
Aorian'izany, kitiho ny View Plans, ary avy eo mifidiana amin'ireo safidy telo famandrihana atolotra anao (Basic, Standard, ary Premium). Vantany vao vita ny safidinao, kitiho ny Continue.
Aorian'izany, ny dingana manaraka dia ny famoronana kaontinao. Mba hanaovana izany, ny hany ilainao dia ny mampiditra adiresy mailaka sy teny miafina mety. Fenoy ny saha, ary avy eo tsindrio ny Continu.
Avy eo ny dingana farany dia ny mifantina fomba fandoavam-bola. Azonao atao ny misafidy ny fomba fandoavam-bola eo amin'ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit na PayPal. Aorian'izany dia mila mampiditra ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola ianao, ary avy eo tsindrio ny Start hanombohana ny maha-mpikambana anao. Homena fidirana iray volana any amin'ny tranombokin'ny haino aman-jery feno an'ny Netflix ianao.
Azonao atao mihitsy aza ny manafoana ny famandrihanao amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fotoam-pitsapana hatramin'ny iray andro alohan'ny datin'ny fahatapahana. Hahazo fampahatsiahivana mailaka ianao izay halefa aminao ho fisorohana fanampiny.
Mba hahafahanao misoratra anarana amin'ny fidirana amin'ny mpikambana ao amin'ny Netflix ary tsy ampandoavina na inona na inona, tsarovy foana ny hanafoanana ny famandrihana andro vitsivitsy alohan'ny daty fanoratana manaraka.
Tadidio ihany koa fa i Netflix dia nijanona nanolotra ny volana fitsarana maimaimpoana any amin'ny firenena sasany, saingy manolotra fampiroboroboana manokana izay ahafahanao miditra amin'ity fampiroboroboana ity mandritra ny andro vitsivitsy. Manoro hevitra anao izahay hanaraka ny Netflix amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo hahafantatra ny tolotra ho an'ny mpampiasa vaovao.
Ohatrinona ny vidin'ny Netflix aorian'ny fitsapana maimaim-poana?
Ny ankamaroan'ny tambajotram-pahitalavitra tariby sy zanabolana izay manolotra fandaharana amin'ny filma dia tsy milalao azy ireo fotsiny amin'ny takariva ary mandritra ny alina be, rehefa matory ny ankamaroan'ny mpiasa.
Ny zavatra ratsy indrindra dia ny famerenany ny sarimihetsika 10 na 20 mitovy hatrany hatrany mandritra ny taona.Mamela anao, ny mpanjifa, tsy hanana safidy firy momba ny karazana sarimihetsika azonao jerena ity.
Netflix dia manana sarimihetsika kilasika sy maoderina an-jatony takiana, hijerena isaky ny mahataitra anao ny toe-tsaina.Ny fanangonana azy ireo dia misy tsy misy fetra, ao anatin'ny Netflix maimaim-poana mandritra ny iray volana. Izany dia hanome anao fahatsapana tsara ny zavatra atolotr'izy ireo.
Endri-javatra ao amin'ny Netflix:
Ny vanim-potoana manontolo amin'ny seho fahitalavitra malaza indrindra dia misy -
Netflix, tsy mila miandry ela ianao vao hahalala hoe inona no hitranga manaraka amin'ny seho ankafizinao satria manolotra ny vanim-potoana manontolo an'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza taloha sy ankehitriny i Netflix.Navoaka ihany koa ny andian-tsarimihetsika tany am-boalohany Netflix nefa tsy nisy fe-potoana fiandrasana teo anelanelan'ny fizarana izay mazava ho azy fa fialan-tsiny lehibe handaniana ny Sabotsy na Alahady iray manontolo hipetraka eo alohan'ny fantsona!
Tsy misy fanelingelenana ara-barotra -
Eny, noho izany, ny fantsona fampielezam-peo rehetra eo an-toerana sy ny tambajotra dia mahazo ny volany amin'ny alàlan'ny fivarotana ankamaroan'ny doka fanaovana dokambarotra ary fanerena anao hijery dokambarotra tsy misy farany ho an'ireo vokatra tena tsy tianao vidina.Araka ny fantatrao, ny dokambarotra dia mihinana 21 minitra amin'ny fotoanao isaky ny ora laninao eo alohan'ny vata fandefasana tariby. Miaraka amin'ny Netflix ianao dia mijery ny zavatra tianao hojerena rehefa te hijery azy ianao.
Midika izany fa afaka mijery sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary horonan-tsary bebe kokoa ianao nefa tsy mandany ora fanampiny amin'ny fotoananao sarobidy eo alohan'ny fahitalavitra!
Netflix dia tena tia ray aman-dreny -
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Netflix dia ao anatin'ny kaontinao Netflix, hanana fahazoana 4 isan-karazany ny fifehezana ny ray aman-dreny ianao: ankizy kely, ankizy lehibe, tanora ary olon-dehibe.Ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny dia ahafahanao manangana mombamomba samihafa ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Rehefa miditra ao amin'ny kaonty Netflix-nao amin'ny fitaovany izy ireo dia tsy ho afaka hiditra amin'ny fandaharana izay tsy mety amin'ny ambaratonga nomenao azy ireo.
Ara-dalàna tanteraka izany -
Tsy mora velively ny tsindrio ireo tranokala torrent ary 'piraty' tsotra fotsiny ny fandaharana tianao hojerena. Raha tratra jiolahin-tsambo ianao na ny fianakavianao dia mety iharan'ny sazy mavesatra sy fotoan'ny fonja ianao.
Na dia maro amintsika aza no mieritreritra fa voaro amin'ny fanenjehana isika, ny tena zava-misy dia eo am-pelatanan'ny fikambanana sy ny orinasa tompon'ny atiny ianao, dia piraty izany. Afaka manenjika anao amin'ny fotoana rehetra izy ireo.
Netflix dia azo entina -
Azonao atao ny mijery azy mora foana any am-piasana na telefaona na takelaka misy anao. Topazo ao anaty fiara izy io eo am-piandrasana na inona na inona.Ny hoe mpikambana ao amin'ny Netflix dia midika fa afaka miditra amin'ny kaontinao na aiza na aiza, raha mbola manana fitaovana sy fifandraisana Internet mifanentana ianao.Azonao atao ny mandray an'i Netflix amin'ny vakansy miaraka aminao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, nohazavaina taminay momba ny Netflix sy ny fomba ahazoanao maka andrana maimaimpoana koa Netflix. Afaka mahazo mora foana ianao a Netflix maimaim-poana fitsarana amin'ny fitsidihana ny tranonkalany sy fisoratana anarana. Tadidio ihany koa fa raha tsy mila ny fotoam-pitsarana 30 andro maimaim-poana ianao na tsy afa-po amin'ny serivisin'izy ireo araka izay antenainao hatao dia azonao atao ny manafoana ny famandrihana amin'ny fotoana rehetra alohan'ny fe-potoana 1 volana fa raha tsy izany dia voasazy ianao.
Fanomezana fitsapana bebe kokoa mety ho tianao:
Fitsarana maimaim-poana amin'ny horonantsary praiminisitra
Fitsapana maimaim-poana mandritra ny 30 andro
Norsemen Season 4: Nohavaozina sa Nofoanana?
Hope Solo Net Worth 2022: Fantaro bebe kokoa momba ny fiainany tany am-boalohany sy ny asany
tranonkala maimaim-poana hijerena sarimihetsika vaovao
ny lalao wii tsara indrindra hatramin'izay
ny fomba fampitomboana ny habetsaky ny memo ampiasaina minecraft
sarimihetsika vaovao maimaim-poana tsy misintona
ny fomba ahazoana connectpal maimaim-poana
pokemon go promo code ho an'ny vola madinika